जापानी सम्राट आकिहितोले किन गरे राजगद्दी परित्याग गरेको घोषणा ? | Kantipath.com
वयोवृद्ध आकिहितोले स्वास्थ्य र उमेरका कारण राष्ट्रप्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्न असमर्थ भएको जनाएपछि उनले गद्दी त्याग्ने वैधानिक अनुमति पाएका थिए। पदत्याग गरे पनि आकिहितो मध्यरातसम्म सम्राट नै रहनेछन्।
आफ्नो अन्तिम भाषणमा सम्राट आकिहितोले जापान तथा विश्वमा शान्ति र समृद्धि होओस् भन्ने कामना गरे। उनले भने, “मलाई प्रतीकका रूपमा स्वीकार र समर्थन गरेकोमा म जनताप्रति धेरै कृतज्ञ छु।”
“साम्राज्ञीसहित म हृदयदेखि नै रेवा युग शान्त तथा फलदायी होस् भन्ने कामना गर्छु। अनि म हाम्रो देश तथा विश्वका जनताको कल्याण र सुखका लागि प्रार्थना गर्छु।”
जापानमा सम्राट फेरिएपछि युगको नाम पनि फेर्ने परम्परा छ।
किन त्यागे गद्दी?
आफ्नो खराब स्वास्थ्यका कारण गद्दी त्याग्न चाहेको सम्राट आकिहितोले तीन वर्ष अघि नै बताएका थिए।
“मेरो स्वास्थस्थिति बिस्तारै खस्कँदै गएको विचार गर्दा मैले राज्यको प्रतीकको रूपमा गर्नुपर्ने कर्तव्य निर्वाह गर्न मलाई कठिन भइरहेकोमा म चिन्तित छु,” उनले त्यतिखेर भनेका थिए।
सन् १८१७ यता जापानको राजगद्दी स्वेच्छाले त्याग्ने उनी पहिलो सम्राट हुनेछन्। जापानमा गरिएका मत सर्वेक्षणहरूले अधिकांश जापानीहरूले सम्राटको गद्दी त्याग्ने मनशायको समर्थन गरेका थिए। त्यसको एक वर्षपछि संसद्ले उनको गद्दीत्याग सम्भव तुल्याउन कानुन पारित गरेको थियो।
को हुन् नारुहितो?
सम्राट आकिहितोले गद्दीत्याग गरेपछि उनका छोरा नारुहितो जापानका १२६ औँ सम्राट हुनेछन्। उनी गद्दीनसीन भएपछि जापान ‘राइवा’ युगमा प्रवेश गर्नेछ र सन् १९८९ देखि सुरु भएको सम्राट आकिहितोको शासनकालको ‘हाइसाई’ युगको अन्त्य हुनेछ।
उनन्साठी वर्षीय नारुहितो २८ वर्षको उमेरमै युवराज घोषित भएका थिए। उनले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा पढेका छन्। सन् १९८६ मा एक भोजका बेला उनले युवराज्ञी मासाकोलाई भेटेका थिए। उनीहरूको विवाह सन् १९९३ मा भयो।
शाही दम्पतीको एक्लो सन्तानको रूपमा राजकुमारी आइको सन् २००१ मा जन्मिइन्। तर जापानको वर्तमान कानुनले महिलालाई गद्दी आरोहण गर्न अनुमति दिँदैन। त्यसैले उनकी काका राजकुमार फुमिहितो अबको उत्तराधिकारी हुनेछन्।
यस्तो छ जापानको राजपरिवार
नारुहितो सम्राट भएपछि उनका भाइ फुमिहितो युवराजका रूपमा राजगद्दीको उत्तराधिकारी हुनेछन्। त्यसपछिको क्रममा फुमिहितोका छोरा हिसाहितो हुनेछन्। बीबीसी
Previous Previous post: एउटा रुग्ण जलविद्युत् आयोजना : यसरी भयो सफल
Next Next post: चिट चोर्न नपाएपछि १ सय ६५ विद्यालयका सबै विद्यार्थी फेल
किन गद्दी त्याग्दैछन् जापानी सम्राट आकिहितो ?